लुक्लामा विमान दुर्घटनाः चालकको मृत्यु, दुई घाइतेलाई काठमाडौं ल्याउन सकिएन. – Sabaikoaawaj.com
लुक्लामा विमान दुर्घटनाः चालकको मृत्यु, दुई घाइतेलाई काठमाडौं ल्याउन सकिएन.
शनिबार, जेष्ठ १३, २०७४ 8:30:44 PM	मा प्रकाशित
काठमाडौं ,१३ जेठ/ सोलखुम्बुको लुक्ला विमानस्थलमा गोमा एयरको विमान दुर्घटनामा परेको छ । दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका विमानका चालक पारस राईको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ भने चालक दलका दुई सदस्य पनि घाइते छन् । काठमाडौंबाट उठेको गोमा एयरको कार्गो विमान अवतरणका क्रममा दुर्घटनामा परेको थियो । विमान धावनमार्गबाट केही तल खसेको र अगाडिको भागमा क्षति पुगेकाका कारण चालक राईको उद्दारमा कठिनाई भएको थियो ।
उद्दार लगतै काठमाडौं ल्याउन हेलिकोप्टर पठाइएको भएपनि मौसम खराब भएका कारण सम्भव भएन । उनको लुक्ला अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको सोलखुम्बु प्रहरीले जनाएको छ । सहचालक श्रीजन मानन्धरको उपचार जारी छ । विमान परिचारिका प्रज्ञा महर्जनलाई काठमाडौं पठाउन खोजिएको थियो तर, खराब मौसमका कारण सम्भव भएन ।
उद्दारपछि लुक्ला अस्पताल भर्ना गरिएका उनलाई हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं पठाउन भन्दै फेरि विमानस्थल ल्याइएको थियो । तर, खराब मौसमका कारण हेलिकोप्टर उड्न नसकेपछि फेरि फर्काएर लुक्ला अस्पतालमा नै लगिएको छ । मौसममा सुधार आउनासाथ उनीहरुलाई थप उपचारका लागि काठमाडौं पठाइने विमानस्थलका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
प्रकाशित मितिः शनिबार, जेष्ठ १३, २०७४ 8:30:44 PM